UJoshua Kimmich Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseGerman UJoshua Kimmich Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Mr Versatile". Indaba yethu ye-Joshua Kimmich Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi e-OFF-kancane ayengaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nokuhlakanipha kwakhe kwe-tactical intelligence. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abawazi okuningi mayelana noJoshua Kimmich's Bio okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UJoshua Walter Kimmich wazalwa ngosuku lwe-8th kaFebhuwari 1995 eRottweil, eJalimane. Wazalwa nonina, u-Anja Kimmich nobaba, uBerldld Kimmich.
UJoshua Kimmich wazalwa enamahloni futhi enokuthula, kodwa ngakolunye uhlangothi, angase abe yinkimbinkimbi futhi enamandla njengoba abazali bakhe bebona. Kulungile, wayenesiqalo sokushaya ngesikhathi sokuphila kwakhe ebuntwaneni. UKimmich wakhulela edolobhaneni elincane laseBösingen, elisemkhatsini we-Black Forest kanye nenhloko-dolobha yaseBenen-Württemberg eStuttgart. I-Bösingen yindawo evamile yasemaphandleni lapho kungekho lutho oluphela khona kubafana abancane uma kukhona ibhola emanzini onke omfana omncane. Njengoba bengenabakhileyo be-1,700 kanye nabanye abafana edolobhaneni, ibhola liba yinto yokuzilibazisa evamile eKimmich.
Ngaleso sikhathi, uKimmich wayezokwenza phambi kwensimu yakhe yasendlini nasemasangweni. Njengoba enza lokho, amafasitela amaningi futhi amaningi kakhulu ayengeke ahlaselwe yibhola lakhe elihamba phambili. Ngokumangalisa ukuthi abazali bakhe abangeke bakhathazeke ngokuthi indodana yabo yonakalise, bahlenga ikhambi elilodwa ngenkathi befaka ingilazi eyodwa ephukile ephukile yindodana yabo nabangane bayo. Njengoba uKimmich ebeka;
"Ngelinye ilanga, ngafika ekhaya futhi ngathola imigomo emibili yebhola lebhola ebaleni langaphambili,"
UKimmich utshele i-PlayerStribune.
'Iqembu lebhola lebhola lezinyawo alizange libadinge, futhi abazali bami babebathole ezandleni zeqembu. Ubaba wabhekisela esakhiweni sezwe langasese elingasetshenziswanga ngaphesheya komgwaqo wathi kimi nakubangane bami; bafana, hamba lapho futhi enyoy ibhola lakho !!
UJoshua Kimmich, ukudlala ibhola nabangani bakhe epaki entsha wavula isahluko esisha empilweni yakhe. Lokhu kwenza izifiso zakhe zokuba umdlali webhola lezinyawo nje kuphela. Ngaleso sikhathi, uKimmich wayezobuka ukulingisa ezinye zezithombe zakhe zakuqala phakathi kwazo zihlanganisa; Zinedine Zidane, Bastian Schweinsteiger futhi UTomas Rosicky. Lawa yiwona kuphela amagama amathathu ayenawo ngemuva kwezingcweti zezingubo. Ukubheka izindima lezi zithombe ezidlalwa kungasiza umuntu ukuthi abonise ukuthi indima uKimmich ayethanda ukuyenza ensimini.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Qala kumsebenzi
Uthando lukaKimmich lwebhola lwambona wabhala ohlwini lweqembu lesikhamuzi sendawo, owamnikeza isiteji ukukhombisa amakhono akhe. Kwafika umzuzu owodwa lapho iqembu lidlala ngokumelene neqembu lentsha yaseStuttgart.
"Iqembu lendawo laliyiqembu abaningi abadlali abaqeqeshiwe,"
UKimmich ukhumbula futhi waqhubeka ...
"Ngesikhathi ngidlala neqembu lesibili le-stuttgart, ngathola yonke imigomo emithathu ngokumelene nabo futhi sathola i-3-2."
Ngempela lokhu kwakungeyona indlela embi yokuqaphela. Ngokushesha ngemuva komdlalo, ama-scouts afaka phakathi kukaStuttgart aqala ukuzungeza uKimmich njengo-shark ngenhloso yokuthola isignesha yakhe no-Stuttgart ehola indlela. Isinqumo esiphezulu sashiywa abazali bakaKimmich. Ekuqaleni benqaba isimemo sokuba aqale ukuqeqeshwa noStuttgart. UMnu noMnu. Berthold Kimmich, bashintsha ingqondo ngemuva kokuthi umqeqeshi weqembu leqembu lakhe ehambele ekhaya.
Ngemuva kokuchitha iminyaka eminingana eya eStuttgart izikhathi eziningana ngesonto, uKimmich waqala ukuthatha izinyathelo zakhe zangempela emhlabeni webhola ngesikhathi esamukelwa esikoleni sikaStuttgart njengomunye wabafundi be-18 ngonyaka.
UKimmich, kanye nomngane, wayeyilungu elisha kunazo zonke elilethwa kulo VfB Stuttgart ithimba lentsha. Kuleli qembu, wanikezwa yonke imisebenzi ephansi kepha akazange akhononde. ANgolunye uhambo lwakhe olusha, wayehlale eyaziwa ukuthi nguye owokugcina oshiya ukuqeqeshwa, isibonakaliso sokuzimisela ukuthi uzokwenza. Lo mdlalo wambona uthuthuka futhi udlula izinkampani zakhe. Nokho, Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kweKimmich wahlakulela ubukhulu obuhlukahlukene bokudlala ngenxa yesimo sakhe esinqunyiwe.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Ukuhlelwa Kokubuyiselwa Kokubuya Nokukhulu
Umzuzu odabukisayo weza uKimmich lapho umqeqeshi amlethela ngakwesobunxele eqenjini ukuze athole amathuba amakhulu.
Ukuthuthukiswa okusheshayo kukaKimich kanye nokubukeka kwakhe okuhambisana neqembu lakhe lesibusana kwambonela ngokushesha kusuka ebusheni kuya kumdlali ophezulu. Ngeshwa, waba nenhloko enkulu. UKimmich esezibonele njengomuntu okhulile futhi ephuma kuzo zonke izinhlu zentsha wenza isicelo sokudlala VfB Stuttgart ithimba eliphakeme. Isicelo sakhe senqatshelwe ukumlethela ubuhlungu obukhulu kangaka. Ngokomqeqeshi wakhe osemusha weStuttgart.
'Awunelisekile, umzimba wakho awunamandla ngokwanele,'
Umqeqeshi omusha wamtshela, wanezela ukuthi udinga olunye unyaka neqembu le-VfB Stuttgart lentsha. UKimmich wake wakhumbula ukuthi lesi sinqumo sabuhlungu kakhulu naphezu kokuzama ukuzibamba ubuhlungu.
Esikhundleni sokuhlala esimweni esibucayi, uKimmich omncane wathola induduzo. Wathola amandla ngokunquma ukufuna inzuzo yakhe kwenye indawo. Ngenhlanhla, kwenzeka nje ukuthi umqeqeshi wakhe osemusha owayengumqeqeshi osemncane owayemkhonze eStuttgart usuke ehambile RB Leipzig, futhi wayemfuna lapho. U-Kimmich uphinde wehliswa ...
"Ngicabanga nje, nginethuba futhi kufanele ngithathe !!"
ELeipzig, wayeyingxenye yeqembu elihlaselayo kakhulu elihlaselwa yilo mdlalo lapho izimfanelo zakhe ezithinta ibhola phambi kwe-back back ezine zikhanya khona.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -I-Pep Talk
Ngenxa yokubusa kwakhe esemncane, uKimmich wathola ithuba lokujoyina i-Bayern ku-2015 Guardiola ukubona ngokusebenzisa ubuntu bakhe bokudlulisa. Ku-akhawunti yomhlangano I-Pep, UKimmich uthe ...
"Ngangihlala ekamelweni lesigungu emahhovisi eBayern elinde ukuhlangabezana noPep Guardiola. Konke engangikuzi ngePep kwakuvela kulokho engangikubone ku-TV. Ngangesaba kakhulu, kepha njengoba ehamba, ngangizwa ngaso leso sikhathi - leso sithemba. Futhi ngokushesha ngazi: Ngifuna ukudlala i-Bayern. U-Pep wakhuluma nami ngamandla ami nobubuthakathaka bami, nokuthi wayefuna ukungisiza kanjani ukuba ngize umdlali ongcono ngokufunda isitayela esithile sokudlala. 'Ngifuna wena kuleli qembu,' wangitshela. Lona umzuzwana angisoze ngikhohlwa. Kusukela ngaleso sikhathi, waba ubaba kimi. "
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ukubhekana nokucindezeleka kwebhola nge ukudala indlela yokuphila ngaphandle kwekhasi kwakha isithombe esiphelele sikaKimmich. Ubuhlobo bakhe noLina Meyer oboniswe ngezansi buye waba nendima ebalulekile ekwakheni impilo ejabulisayo.
U-Lina wazalelwa eBabe Bevensen, idolobha elisesifundazweni sase-Uelzen e-Lower Saxony, eJalimane. Wafunda umthetho eyunivesithi. UKimmich wahlangana nentombi yakhe enhle uLina Meyer ngesikhathi edlala uRB Leipzig lapho esebenza khona. Bobabili baqala njengabangane abakhulu futhi kamuva baba abathandi.
Kimmich's ukuhamba ngezinyawo nokuzimisela ukuphumelela ngokuqhubekayo kuqhutshwa njalo yiLina owake waba mnandi. Ngokubheka abathandekayo ababili ngezansi, abalandeli bazothola kunzima ukukholelwa ukuthi uLina Meyer uneminyaka emithathu ubudala kunesoka lakhe.
Ngenxa yobuhle bayo, uLina uye waba intandokazi phakathi kwamaJalimane ama-WAGs.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Abazali bakaJoshua Kimmich: Ngezansi abazali bakaKimich abaziqhenyayo u-Anja noBerthold embusweni wabo wendodana yabo ebusuku abadlali abadumile kakhulu esifundeni saseRottweil, idolobha lakubo.
Uyise kaJoshua Kimmich uBerldld wade wadlala ibhola le-German amateur. UBerthold uhlala nomkakhe u-Anja (umama kaKimmich) eBösingen ngaseRottweil, eNingizimu-ntshonalanga eJalimane. Uyaziwa ngokuba ngubaba ozinikela ngokwakhe okhethekile "Pep Talk" endodaneni yakhe, ngaleyo ndlela amenze abe nesibindi futhi abe nesibindi. Lokhu akwenzile ekumangaliseni kwababukeli njengoba kuboniswe ngezansi.
Bobabili abazali ikakhulukazi umama wakhe, u-Anja Kimmich ulahlekelwa yindodana yakhe isikhathi ngasinye lapho engasekho ukuzinikela kwebhola. Bobabili ukuboshwa kwamantombazane kanye nendodana bayaqhubeka njengoba kubonisiwe esithombeni ngezansi.
U-Anja ukhuluma noJoshuwa efonini okuningi. Okuningi okuningi okuxoxisanayo kuhlanganisa u-Anja enikeza imiyalelo yendodana yakhe namathiphu okupheka. Unesibopho sokuqamba indodana yakhe ngokuthi 'uJoshuwa' oyinceku kaMose evela eTestamente Elidala yeBhayibheli.
Udadewabo kaJoshua Kimmich: Ngesikhathi abazali bakhe behlala kude naye, uDebora uJoshua udadewabo uhlala usondelene kakhulu. UDebora uhlala eMunich esitokisini esabelane ngaso esithathwe umfowabo. Njengase-2 eminyakeni edlule, uDebora wayengumfundi we-Undergraduate eMunich. Yingakho umfowabo efuna ukuqhubela phambili imfundo yakhe ngesikhathi esithile emsebenzini wakhe webhola.
UKimmit waphumelela ngebanga le-1.7. Ngaphandle kwebhola, uKimmich ufuna ukutadisha, ngokukhethekile ukuphathwa kwebhizinisi ngesikhathi esithile emsebenzini wakhe. UDebora udadewabo uyaziwa ukuthi unezinwele ezimnandi, ezinemibala emihle kanye nomzimba omuhle. Uhlale emasimini asekela umfowabo.
UNCLE: UJoshua Kimmich unomalume ogama lakhe linguWalter ofana naye naye uyinkanyezi emndenini. Nge-band "I-Brillant ", UWalter ungumculi ophumelelayo we-pop.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Imininingwane yomuntu
Ngaphandle kwebhola, enye into yokuzilibazisa "I-tennis". Ukudla okuthandayo kuyi-spaetzle futhi uyakuzonda izithombe.
UKimmich ungumcabangi ojulile nomuntu ohlakaniphile kakhulu othanda ukusiza abanye. Uyakwazi ukubona ngaphandle kokucwasa, zombili izinhlangothi, okwenza kube umuntu ongakwazi ukuxazulula kalula izinkinga.
Nakuba angakwazi ukuzivumelanisa kalula namandla asondelene naye. UKimmich angaba nesidingo esijulile sokuthi abe yisikhathi esithile, eyedwa futhi engaphandle kwayo yonke into. Lokhu akwenza ukuze abuyisele amandla akhe futhi abe nokucabanga komsebenzi. Ubheka ibhola lebhola njengendawo egcwele amathuba.
UKimmich usebenzisa ingqondo yakhe ngaso sonke isikhathi ematheni. Unayo ikhwalithi yombono okwazi ukubona ikusasa ngokuqondene nokusebenza kwakhe. Lapho efunda esikoleni, wazi kahle ukuthi yini edingekayo ukuzibona.
UJohn Kimmich Ubuntwana Bombono Plus Untold Biography Facts -Ukuqhathaniswa noFilipp Lahm
Isikhundla sakhe emdlalweni weqembu kanye nezwe, senze ukuqhathaniswa neBayern neJalimane i-legend Philipp Lahm.
Abathandi bangaphikisana ngokuthi uKimmich unemvelo engokwemvelo ukuze aqhube phambili kunomuntu obengaphambi kwakhe. Ukuhlakanipha kwe-Kimmich's tactical lapho uya phambili cishe kumamaka njengokungathi unesimo semvelo somdlali kunomvikeli.
Naphezu kwesibindi, uKimmich uzame ukuzihlukanisa neziqhathaniso zaseLahm, egcizelela isifiso sakhe "Hamba indlela yakhe" emsebenzini wakhe. Ngeshwa kuye, kubonakala sengathi ukufaniswa ngeke kuhambe ngokushesha ngoba kuyaqhubeka. Nazi ezinye iziqhathaniso;
UKimmich ube nemigomo eyisikhombisa ekubukeni kwe-71 Bundesliga eBayern ngesikhathi uLahm ehola i-12 ku-332.
Kanti futhi kunomncintiswano omkhulu kunoLahm, uKimmich unemigomo emithathu yeJalimane ekubukeni kwe-25 kusukela ngo-May 2016, kuyilapho uLahm ephethwe amahlanu ku-113 caps, wasakaza eminyakeni engu-11.
Isifinyezo esilula ukuthi uKimmich akayona Lahm NOMA a I-hymrid Lahm-Müller. Ngempela ungu "Ngempela umkhwa weSwitzerland Army womdlali".
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeJoshua Kimmich yokuBantwana kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
Jerome Boateng Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso